‘कांग्रेस महाधिवेशन फागुनमा सम्भव छैन’: महामन्त्री डा. कोइराला — donnews.com
‘कांग्रेस महाधिवेशन फागुनमा सम्भव छैन’: महामन्त्री डा. कोइराला
क्रियाशील सदस्यता वितरणदेखि दावीविरोधलगायत काम गर्न नैं बाँकी
तस्विर साभारः कान्तिपथ डटकम
चितवन । नेपाली कांगे्रसका महामन्त्री डा शशाङ्क कोइरालाले पार्टीको महाधिवेशन फागुनमा सम्भव नभएको बताउनुभएको छ । पत्रकारसँग यहाँ आज कुरा गर्दै डा कोइरालाले क्रियाशील सदस्यता वितरणदेखि दावीविरोधलगायत काम गर्न बाँकी रहेकाले तोकिएका समयमा महाधिवेशन सम्भव नरहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।
कुराकानीका क्रममा उहाँले अहिलेका अवस्थामा कांग्रेस सरकारमा नजाने स्पष्ट गर्नुभयो । सरकारमा जाने हो भने पार्टीलाई ठूलो घाटा लाग्ने सङ्घीय सांसद डा कोइरालाको भनाइ थियो ।